IBlack Centerset Igumbi Lokugeza Lompompi ngeDrain Assembly Matte Black
Ikhaya / Amanzi okugeza / Oompompi Bokugeza BaseCenterset / WOWOW Centerset Igumbi lokugezela ompompi nge-Drain Assembly Matte Black
Wowow Centerset Bathroom faucet nge-Drain Assembly Matte Black
Bathroom faucet matte black 2 izibambo zinikeza ukusebenza kanye nomklamo wesimanje ngo 1. Ngama-3 weminyaka iwaranti. Thenga Bathroom isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu matte esimnyama 2 izibambo manje!
2321400B imiyalo yokufaka
Indlu yangasese yeMatte Black Single Towel Hooks
WOWOW Round ithawula Ring Matte Black
Itoilet Paper Holder Wall Wall Mounted Mnyama
Bathroom faucet matte black 2 isibambos 2321400B
Njengoba abantu abaningi bekhetha ompompi bendawo yokugezela esiliva noma i-chrome, ungenza isitatimende semfashini esikhulu ngompompi omanzi wokugezela omnyama. Lo mbala awugcini ngokunikeza indlu yakho yokugezela ukubukeka okuhle futhi okukhethekile, umbala omnyama we-matte usacashile futhi uhlukile futhi. Hhayi ngengozi omnyama matte isibe umbala wesimanje wakudala uma kukhulunywa ngemiklamo yokugezela. IMatte black umkhuba ongeke uqhume ngokushesha nhlobo. Isiphetho esimnyama samatope sompompi wasendlini yokugezela singanikeza ukuthinta kwanamuhla kunoma iyiphi indawo yokugezela.
Umuntu angase alithathe kancane iqiniso lokuthi ompompi bendawo yokugezela bangezinye zezici ezibaluleke kakhulu kunoma iyiphi indawo yokugezela maqondana nesitayela. Yize ompompi bendawo yokugezela bancane, abantu bavame ukugxila kompompi bendawo yokugezela njengoba ukubona kwabo kudonswa ngokuzenzakalela kulawa maphuzu okugxila kuwo. Ngakho-ke ompompi bendawo yokugezela bangenza noma baphule noma iyiphi indawo yokugezela. Oompompi bezindlu zangasese banekhono lokuphakamisa indawo yokugezela. Indlu yokugezela elula noma encane ingathola ukuphakama okukhulu ngamapayipi okugezela asesitayeleni. Umklamo wesitayela we-retro wakudala wale mpompi yokugezela WOWOW wenza indlu yakho yokugezela ibe semfashinini ngasikhathi sinye. Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu omanzi matte black 2 izibambo zeWOWOW ngenye yalezi zimpompi zokugezela ezingashintsha imidwebo yakho yokugezela.
Matte emnyama yokugezela isikulufa nge izibambo ezi-2
Isitayela into eyodwa, kepha ukusebenza kungahle kubaluleke kakhulu. Ngokwesisekelo sansuku zonke usebenzisa indlu yakho yokugezela kaningana futhi ufuna ukuthi indlu yakho yokugezela ikunikeze ngendlela esekela inqubo yakho yansuku zonke. Lokho kubalwa ngaphandle kokungabaza ngemisebenzi njengeshawa nebhavu lokugeza. Kepha mhlawumbe usebenzisa usinki wakho wokugezela ngaphezu kwezinye izici zendlu yakho yokugezela. Yingakho kufanele uchithe ukunaka okukhulu kulesi sici sendlu yakho yokugezela. Ngaphandle kwesinki yokugezela esikahle, isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kusetha konke ukusebenza okudingayo.
Isibambo sepayipi lokugezela matte black 2 izibambo zeWOWOW kuqinisekisa umuzwa omkhulu wamanzi. Le mipompi emnyama yokugezela eyi-4 intshi inezibambo ezi-2. Ngalezi zibambo ungalungisa ukushisa kwamanzi nokushesha ngokungathathi izinyathelo kuya ezidingweni zakho. Isigaxa esiphakeme se-arc sikunikeza isikhala esanele phakathi kwesiponji nesinki yakho yokugezela ukuze ugeze izandla zakho kahle noma ugeze ubuso bakho. Ibanga lingama-intshi angu-4.4 futhi linikeza isikhala esanele. Ngenxa yalokho, akudingeki ulwe nesikhala esilinganiselwe njengompompi wokugezela ophansi we-arc.
Ngaphezu kwakho konke, umbhobho ojikelezayo wepayipi lokugezela matte black 2 izibambo ze-WOWOW unikeza ukujikeleza okungama-360-degree ukusetshenziswa okulula. Izibambo zepayipi lokugezela le-matte black 2 liphuma ne-lift rod drain ngombala ofanayo omnyama ukuze wakhe ubunye ngesinki yakho yokugezela. Kulula ngokukhululeka ukuvula nokuvala lo mhlangano wokukhipha amanzi nesibambo esihlanganisiwe ngemuva kwaleli ompompi lokugezela.
Isiteji sokugezela sokuqala esisezingeni eliphezulu matte black 2 izibambo
Ngaphandle kwemiklamo yayo yangaleso sikhathi futhi enesibindi, i-WOWOW yaziwa kakhulu ngamazinga ayo asezingeni eliphakeme. Njengoba icindezela la mazinga wekhwalithi ebhodini lokudweba iye efektri yabo yesimanjemanje, yonke imininingwane emincane yaleli ompompi yokugezela yenziwe yaba ngcono kakhulu. Lokho kukunika ipompo yokugezela esezingeni eliphakeme ezosebenzela injongo yayo kahle futhi iqinisekise ukubekezelela impilo ende.
Umlenze oqinile wesibambo sepayipi sokugezela se-WOWOW matte black 2 senziwe ngezinto zethusi eziqinile njengoba lokhu kuqinisekisa ukusebenza kahle nokubekezela okude kakhulu. Futhi ukwakhiwa kwenziwa ngethusi eliqinile futhi kuqedwe nge-zinc alloy. Awudingi ukukhathazeka ngezinkinga zokugqwala ngenxa yalezi zinto. Ngaphandle kwalokho, le ompompi yokugezela ayina-lead ukuvikela umndeni wakho kakhulu. Uzwa umehluko wale mfanelo ngokushesha lapho uyibamba. Le mibhobho emnyama yokugezela matte black 2 izibambo nayo iyamelana namabala. Ngakho-ke kulula ukuyinakekela. Yilokho okutholayo uma uthenga ompompi bendawo yokugezela esezingeni eliphakeme.
Ezomnotho yokugezela isikulufu faucet matte omnyama 2 izibambo
Idiski ye-ceramic ye-premium ngaphakathi kwaleli ompompi lokugezela elenziwe ngombala omnyama lenza amanzi ageleze kahle futhi angaconsi amanzi. Ispout saleli ompompi lokugezela siqukethe i-ABS aerator. Ngalesi sici esisha uzokwazi ukonga amanzi owasebenzisayo futhi usize ukonga namanzi. I-valve eqinisekiswe yi-NSF iphenduka ngokushelela ukukunikeza induduzo enkulu. Igobolondo lekhwalithi ephezulu lihlolwe emijikelezweni yamanzi engama-500,000, futhi belisasebenza kahle. Futhi lokhu ngentengo okwamanje yokonga!
Njengoba inqubo yokukhiqiza ye-WOWOW ibekwe emgangathweni futhi izenzakalelayo, i-WOWOW inganikela ngalezi zibambo zangasese ezisezingeni eliphakeme matte black 2 ngentengo ebiza kakhulu. Ngokubambisana nokuthengwa nokusetshenziswa kwezinto ngendlela esebenza kahle futhi engabizi, i-WOWOW yonga kakhulu ezindlekweni zokukhiqiza. Futhi ngaphandle kokulahlekelwa yinjongo eyinhloko yokukhiqiza imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngaphandle kwamehlo. I-WOWOW iqinisekisa ukuthi ngeke uthole noma yimuphi umpompi wokugezela wekhwalithi efanayo ngentengo ephansi kunalokho esikunikezayo.
Kulula ukufaka futhi kulula ukuyigcina
Le matte black centeret bathroom bathroom with 2 handles kulula ukuyifaka wedwa ngaphandle kochwepheshe. Ngale ndlela ungagcina nokuningi ngokufaka le ompompi yokugezela matte black 2 izibambo ngokwakho. Ipayipi lokugezela elingamasentimitha ama-4 lifanela noma iyiphi intaba enemigodi emithathu. Isibambo sepayipi lokugezela matte black 3 izibambo ziza nesethi yezesekeli zokwenza ukufaka ucezu lwekhekhe, kufaka phakathi ithumbu lamanzi, idreyini yenduku yokuphakamisa kanye nepuleti yedeski ukuze kufakwe kalula.
Ngompompi wasendlini yokugezela matte black 2 izibambo ze-WOWOW uzoqinisekiswa ngepayipi lokugezela elidlula wonke amazinga embonini. Uzokwazi ukugcina le ompompi yokugezela kalula, ngenkathi ungasusa izinsalela zamanzi anzima ngokuthinta iminwe yakho. Njengoba le ompompi yokugezela kulula ukuyihlanza, ungaqhubeka nokusebenzisa le ompompi isikhathi eside, okuqinisekisa amazinga aphezulu wamanzi. WOW hhayi ngeze inikeza iminyaka engu-3 yesiqinisekiso ukuqinisekisa ukusebenza kompompi wayo wokugezela matte black 2 izibambo.
Izinzuzo zasendlini yokugezela isikulufa esimnyama 2 eziphathwayo ngamafushane:
 Unika i-wow-factor kunoma iyiphi indawo yokugezela
 Idizayini emnyama eyingqayizivele ye-matte
 Isikhiphi se-arc ephezulu yokunikela isikhala esanele
 Isithuthuthu esibuhlungu nesingashoni
 Ukusebenza okuphezulu
 Kwenziwe ngezinto zethusi ezisezingeni eliphakeme
 Kulula ukuyihlanza futhi kulula ukuyigcina
 Iwaranti yeminyaka emi-3
I-SKU: 2321400B Categories: Amanzi okugeza, Oompompi Bokugeza BaseCenterset Tags: khipha umhlangano, isibambo ezimbili, isikebhe sokufaka isikebhe
6 x 2.2 x amasentimitha angu-7.5
Phakamisa i-Rod Drain